High Gua Video က Besso Video ကို မတရား ယှဉ်ပြိုင် မှုအတွက် ဒေါ်လာ ၁၈၈, ၃ ၀၆ ဖြင့် တရားစွဲ – Pandaily
Jan 05, 2022, 12:11ညနေ 2022/01/07 10:39:58 Pandaily
မကြာသေးမီက ဟူ နန် အဆင့်မြင့် ပြည်သူ့ တရားရုံးက ကြေငြာ ခဲ့သည်Baidu Video (ယခု Baisuo Video ဟုအမည် ပြောင်း) သည် ဖရဲသီး ဗီဒီယို ဆာဗာ တွင်သိမ်းဆည်း ထားသော ဗီဒီယို အမှု ကိုပြန်လည် တင် သည်တရားရုံးက Baidu Xiaodu သည် ချိုးဖောက် မှုများကို ရပ်တန့် ပြီး မျှတ မှုမရှိသော ယှဉ် ပြို င်မှုကို ရပ်တန့် စေပြီး စီးပွားရေး ဆုံးရှုံး မှုနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး စရိတ် များအတွက် ယွမ် ၁. ၂ သန်း (ဒေါ်လာ ၁၈၈. ၃ ၀၆) ကို လျော်ကြေး ပေးခဲ့ပြီး ပြ mobile နာ ကိုရှင်းပြ ရန် ၎င်း၏ မိုဘိုင်း ဖောက်သည် ၏ ပင်မ စာမျက်နှာတွင် ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Bytedance သည် ဖရဲသီး ဗီဒီယို ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် နှင့် အက် ပလီကေးရှင်း ကို တီ ထွ င်ပြီး လည်ပတ် ခဲ့ပြီး ဖရဲသီး ဗီဒီယို ၏ စာသား နှင့် ဂရပ်ဖစ် အမှတ်တံဆိပ် များပါ ၀ င်သည့် ကျေးလက် အကြောင်းအရာ အလိုက် ဗီဒီယို များစွာကို Besso Video သို့ တင် ခဲ့သည် ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဗွီဒီယို ကို ပထဝီ ဒေသ အမျိုးမျိုးတွင် ရှာဖွေ ပြီး မတူညီသော ကွန်ယက် ပတ် ၀ န်းကျင် တွင်ပြသ ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များ ကိုပြောင်းလဲ သည်။ ဒီ ဗီဒီယုိ ေတြမွာ တင္ သူရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို မျပ သလုိ တခ်ိဳ႕က ေၾကာ္ျငာ ေတြကိုလည္း ျပသ ထားပါတယ္။
Baidu နှင့် Xiaodu နှစ်မျိုးလုံး သည် Baidu ဗီဒီယို ဝက်ဘ်ဆိုက် များ ၏အမှန်တကယ် အော်ပရေတာ များ ဖြစ်သည်ဟု Bytedance မှ ယုံကြည်သည်။ လုပ်ငန်း တစ်ခုတည်း တွင် ပြိုင်ဘက် များအနေဖြင့် သူတို့၏ ဗီဒီယို များကိုပြန်လည် ပေးပို့ ခြင်းနှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များကိုဖယ်ရှား ခြင်းသည် Bytedance နှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ချိုးဖောက် မှု အတွ က်မ မျှတသော ပြိုင် ဆို င်မှု များဖြစ်သည်။
Baidu နှင့် Xiaodu တို့က ၎င်းတို့သည် Besso Video ၏အမှန်တကယ် လည်ပတ်မှု တွင်မပါ ၀ င် ကြောင်း ငြင်းခုံ ခဲ့ကြသည်။ များသောအားဖြင့် ၎င်း၏ ကျေးလက် အမျိုးအစား ဗီဒီယို တို များကို ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ဖျက် ခြင်း ကဲ့သို့ အသုံးပြုသူ များမှ တင် လေ့ရှိသည်။
Baidu သည် Besso ဗီဒီယို ဝက်ဘ်ဆိုက် ကို လည်ပတ် ကြောင်းသက်သေပြ ရန် လုံလောက်သော သက်သေအထောက်အထား များ မရှိကြောင်း တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဗီဒီယို ဖွင့် နေစဉ် Xiaodu သည် ဖရဲသီး ဗီဒီယို ၏ စာသား နှင့် ဂရပ်ဖစ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များကိုဖယ်ရှား ခဲ့ပြီး bytedance ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ၏ သီးသန့် အခွင့်အရေး ကိုချိုးဖောက် ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Xiaodu သည်၎င်း၏ ပလက်ဖောင်း ရှိ ကျေးလက် အမျိုးအစား မှ ဗီဒီယို အတို များကို Baisou Video App ၏ ကျေးလက် အမျိုးအစား သို့ ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ တိုက်ရိုက် ပြန်လည် တင်ခဲ့သည်။ Bytedance ကဤ အပြုအမူ သည်မ မျှတသော ယှဉ်ပြိုင်မှု ဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:China Webcasting Service Association-ဗီဒီယို ကလစ် တို များကို ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ တည်းဖြတ် ခွင့်မပြု ပါ
China Judgment Online ၏အဆိုအရ Bytedance သည် Xiaodu နှင့် Baidu တို့အား Wang Gui နှင့် Anna တီဗီ ဇာတ်လမ်းတွဲ များ ကိုချိုးဖောက် ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွား ခဲ့သည်။ ပေကျင်း ဥာ ဏ ပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့် တရားရုံးက စီးပွားရေး ဆုံးရှုံး မှုအတွက် ယွမ် ၄၀, ၀၀၀ နှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အသုံးစရိတ် အတွက် ယွမ် ၁၂, ၈၀၀ အတွက် လျော်ကြေး အနည်းငယ် ပေး ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။